face massage ကို အိမ်မှာတင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် အဆင့်(၆)ဆင့် - For her Myanmar
ကိုယ်တိုင်နှိပ်တာ ဇိမ်တော့မကျပေမဲ့ ဘတ်ဂျတ်ချွေတာရာ ရောက်တာပေါ့
ယောင်းတို့ရေ … အခုဆိုရင် မိန်းကလေးတော်တော်များများက မိတ်ကပ်ပြင်နည်းတွေထက် နဂိုအသားအရေ ပိုကောင်းအောင် ထိန်းသိမ်းနည်းတွေကို အရင်ကထက် ပိုဂရုစိုက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ Stella က မျက်နှာအသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းပြီး ကြည်လင်လာအောင် မျက်နှာနှိပ်နယ်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းကို အဆင့်လေးတွေခွဲပြီး ဝေမျှပေးပါဦးမယ်နော်…
(၁) အရင်ဆုံး မျက်နှာကို မနှိပ်နယ်ခင် လက်ကို သေချာဆေးပါ။ လက်ပေါ်က ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ မျက်နှာပေါ်ရောက်ပြီး ဝက်ခြံတွေ မဖြစ်လာစေချင်ဘူးဟုတ်..
Related article >>> မိတ်ကပ်မလိမ်းထားသလို ထင်ရတဲ့ မိတ်ကပ်ပုံစံရအောင် ပြင်တဲ့အခါ သိထားရမယ့် အချက် (၆)ချက်
(၂) Moisturizer အနည်းငယ်ကို မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင် နဖူးကို လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေသုံးပြီး ‘ U ‘ ပုံစံနှိပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါကယောင်းရဲ့ မျက်နှာကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပြီး ချွေးပေါက်တွေ ကျဉ်းစေပါတယ်။ ဒီပုံစံအတိုင်း (၈)ခါကနေ (၁၀)ခါလောက် လုပ်ပေးရပါမယ်။
(၃) နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ နားထင်တွေကို လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်သုံးပြီး ဖြည်းဖြည်းလေးဖိပေးပါ။ ဒါက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချပေးပြီး နဖူးကတင်းနေတဲ့ အကြောတွေကို ပြေလျော့စေပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုတော့ စက္ကန့် (၃၀) လောက် ဆက်တိုက်လုပ်ပေးပါ။
(၄) မျက်လုံးအောက်တွေအတွက် လက်သြူကွယ်ကိုသုံးပြီး ‘ U ‘ ပုံသဏ္ဍာန် အသာအယာနှိပ်နယ်ပေးပါ။ အရမ်းကြီးတော့ မဖိလိုက်ပါနဲ့နော်။ ဒီနည်းလမ်းသုံးပြီး မျက်လုံးအောက်က ဖောင်းနေတဲ့နေရာတွေကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့အပြင် သွေးလည်ပတ်မှုလည်း ကောင်းစေပါတယ်။
(၅) လက်ချောင်းလေးချောင်းသုံးပြီး ပါးရိုးတစ်လျှောက်ကနေ နားဘက်ကို ဆွဲပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းက အသားအရေကို တင်းရင်းစေတဲ့အပြင် သွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေတာကြောင့် ပန်းသွေးရောင် ပါးလေးနှစ်ဖက်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့။
(၆) မေးရိုးကနေပြီး လည်ပင်းရိုးအထိ အောက်ကိုဆွဲချပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဒါက ယောင်းရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်စေပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုတော့ (၅) ခါကနေ (၁၀)ခါအထိ လုပ်ပေးပါ။
မျက်နှာကို စိတ်ရှည်ရှည်နှိပ်နယ်ပေးတာက သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေရုံမက အသားအရောင်မညီညာတာတွေကို ညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ယောင်းရေ တွေဝေမနေတော့ဘဲ လပိုင်းအတွင်း အမြန်ဆုံး glow ဖို့ မျက်နှာကို ညတိုင်းနှိပ်ကြစို့နော်….
ကိုယျတိုငျနှိပျတာ ဇိမျတော့မကပြမေဲ့ ဘတျဂတျြခြှတောရာ ရောကျတာပေါ့
ယောငျးတို့ရေ … အခုဆိုရငျ မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားက မိတျကပျပွငျနညျးတှထေကျ နဂိုအသားအရေ ပိုကောငျးအောငျ ထိနျးသိမျးနညျးတှကေို အရငျကထကျ ပိုဂရုစိုကျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီတော့ Stella က မကျြနှာအသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့ နညျးလမျးတှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ သှေးလညျပတျမှုကောငျးပွီး ကွညျလငျလာအောငျ မကျြနှာနှိပျနယျပေးတဲ့ နညျးလမျးကို အဆငျ့လေးတှခှေဲပွီး ဝမြှေပေးပါဦးမယျနျော…
(၁) အရငျဆုံး မကျြနှာကို မနှိပျနယျခငျ လကျကို သခြောဆေးပါ။ လကျပျေါက ဘကျတီးရီးယားပိုးတှေ မကျြနှာပျေါရောကျပွီး ဝကျခွံတှေ မဖွဈလာစခေငျြဘူး မှတျလား ?
Related article >>> မိတျကပျမလိမျးထားသလို ထငျရတဲ့ မိတျကပျပုံစံရအောငျ ပွငျတဲ့အခါ သိထားရမယျ့ အခကျြ (၆)ခကျြ
(၂) Moisturizer အနညျးငယျကို မကျြနှာပျေါမှာ လိမျးပေးပါ။ ပွီးရငျ နဖူးကို လကျခြောငျးထိပျလေးတှသေုံးပွီး ‘ U ‘ ပုံစံနှိပျပေးရပါမယျ။ ဒါကယောငျးရဲ့ မကျြနှာကွှကျသားတှကေို ပွလြေော့စပွေီး ခြှေးပေါကျတှေ ကဉျြးစပေါတယျ။ ဒီပုံစံအတိုငျး (၈)ခါကနေ (၁၀)ခါလောကျ လုပျပေးရပါမယျ။
(၃) နောကျတဈဆငျ့ကတော့ နားထငျတှကေို လကျညှိုးနဲ့ လကျခလယျသုံးပွီး ဖွညျးဖွညျးလေးဖိပေးပါ။ ဒါက စိတျဖိစီးမှုတှကေို လြှော့ခပြေးပွီး နဖူးကတငျးနတေဲ့ အကွောတှကေို ပွလြေော့စပေါတယျ။ ဒီအဆငျ့ကိုတော့ စက်ကနျ့ (၃၀) လောကျ ဆကျတိုကျလုပျပေးပါ။
(၄) မကျြလုံးအောကျတှအေတှကျ လကျသွူကှယျကိုသုံးပွီး ‘ U ‘ ပုံသဏ်ဍာနျ အသာအယာနှိပျနယျပေးပါ။ အရမျးကွီးတော့ မဖိလိုကျပါနဲ့နျော။ ဒီနညျးလမျးသုံးပွီး မကျြလုံးအောကျက ဖောငျးနတေဲ့နရောတှကေို ပြောကျကငျးစတေဲ့အပွငျ သှေးလညျပတျမှုလညျး ကောငျးစပေါတယျ။
(၅) လကျခြောငျးလေးခြောငျးသုံးပွီး ပါးရိုးတဈလြှောကျကနေ နားဘကျကို ဆှဲပွီး နှိပျနယျပေးပါ။ ဒီလိုလုပျပေးခွငျးက အသားအရကေို တငျးရငျးစတေဲ့အပွငျ သှေးလညျပတျမှုကို အားကောငျးစတောကွောငျ့ ပနျးသှေးရောငျ ပါးလေးနှဈဖကျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပွီပေါ့။
(၆) မေးရိုးကနပွေီး လညျပငျးရိုးအထိ အောကျကိုဆှဲခပြွီး နှိပျနယျပေးပါ။ ဒါက ယောငျးရဲ့မကျြနှာမှာရှိတဲ့ အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးပွီး အသားအရကေို ကွညျလငျစပေါတယျ။ ဒီအဆငျ့ကိုတော့ (၅) ခါကနေ (၁၀)ခါအထိ လုပျပေးပါ။
မကျြနှာကို စိတျရှညျရှညျနှိပျနယျပေးတာက သှေးလညျပတျမှုအားကောငျးစရေုံမက အသားအရောငျမညီညာတာတှကေို ညှိပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီတော့ ယောငျးရေ တှဝေမေနတေော့ဘဲ လပိုငျးအတှငျး အမွနျဆုံး glow ဖို့ မကျြနှာကို ညတိုငျးနှိပျကွစို့နျော….
Tags: Beauty, face, glow, massage, Routine, skin, skincare, steps, tips